MacBook Pro M1 sy M1 Max mahery, fahatongavan'i macOS Monterey, sy maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Ny herinandro dia nanomboka tamin'ny fampisehoana ny MacBook Pros 14-inch sy 16-inch vaovao, AirPods an'ny taranaka fahatelo vaovao, loko vaovao amin'ny HomePod ary serivisy Siri ho an'ny Apple Music. Raha ny marina dia latsaka ho antsika ity hetsika Apple ity. Niandry ny alatsinainy teo isika rehetra mba hijery izay azon'izy ireo aseho amin'ireo ekipa matihanina vaovao ary tsy diso fanantenana izy ireo, tamin'ity indray mitoraka ity dia toa tsy misy fitarainana, farafaharatsiny amin'ny ankamaroan'ny haino aman-jery sy mpampiasa.
Herinandro izay nanombohantsika tena matanjaka ary manohy mahita antsipiriany momba ireo ekipa vaovao izay tsy naseho tamin'ilay hetsika sy ny vaovao hafa izahay. Amin'ity herinandro ho avy ity dia fotoana tokony hihainoana ireo famerenana horonantsary voalohany fa ny fahatsapana tena tsara amin'ireo ekipa natolotr'i Apple ireo. Inona koa tena akaiky ny famoahana macOS Monterey izahay.
Manomboka amin'ny sasantsasany amin'ireo hevi-dehibe tamin'ny herinandro izahay amin'ny fampisehoana ireo MacBook Pro vaovao ireo ary ireo mpikirakira M1 Pro sy M1 Max. Tsy isalasalana fa niaraka tamin'ny vaovao nandritra ny herinandro izahay momba ireo ekipa vaovao ireo, ny fiverenan'ny seranana HDMI sy ny slot SD.
Teboka iray hafa izay tianay hasongadina dia ny daty famotsorana ofisialy ho an'ny macOS Monterey. Ity kinovan'ny rafitra fiasan'i Apple ity no iray izay nanana be mpitovo indrindra tamin'ny tantaran'ny orinasa ary izao dia azo alatsinainy 25 oktobra ho avy izao.
Fifaliana iray hafa tamin'ny MacBook Pros vaovao manodidina ny seranan-tsambo MagSafe. Tsy tokony nesorin'i Apple mihitsy io fomba fiasa io ao amin'ny MacBook Pro izay niverina hijanona ary hizara habaka amin'ny seranan-tsambo USB C Thunderbolt 4.
Ho famaranana dia zarainay aminao ny hany teboka amin'ireto MacBook Pro izay tsy mitovy hevitra io, ny fahatongavan'ny notch. Ity "volomaso" eo amin'ny efijery ity dia midika fa mitovy amin'ny haben'ny Pro 13-inch teo aloha, mitombo iray santimetatra ny fitaovana miampy Na ahoana na ahoana, tsy fankafizan'ny mpampiasa maro izany. Mifanohitra tanteraka amin'ny fanafoanana ny Touch Bar, izay toa zavatra nandrasan'ny maro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » MacBook Pro M1 sy M1 Max mahery, fahatongavan'i macOS Monterey, sy maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro amin'ny I'm from Mac